Nayakhabar.com: तपाईलाई थाहा छ ? कमिशन फल्ने खोला कहाँ छ ?
तपाईलाई थाहा छ ? कमिशन फल्ने खोला कहाँ छ ?
उदयपुर । गाविसदेखि केन्द्रसम्मको बजेट चारदशकसम्म एउटै तटबन्धमा लगाउँदा पनि बर्खा शुरु भएसँगै खेतबाली बगर बन्ने स्थानीयको चिन्ता वर्षेनि दोहोरिन्छ। उदयपुरको कटारी–९ मा पर्ने गबुवा, भगवानपुर, तित्रीबोट र कटारी बजारका हजारौं घरपरिवारलाई हरेक वर्षात्मा आफ्नो खेत कतिखेर बगरमा परिणत हुन्छ भन्ने चिन्ताले सताउँछ। महाभारत पहाडबाट वेग मारेर र्झ्ने ककरु खोलाले हरेक वर्ष कटान बढाएको छ, जहाँ तटबन्ध बनाउन थालेकै चारदशक भयो।
“बजेटबाट कमिशन र कमसल कामले गर्दा तटबाँधले एउटा वर्षा पनि थाम्दैन”, गबुवाका पञ्चबहादुर राई ९५८० भन्छन्, “कुनै साल त बाँध लगाउनै नपाई बाढीले लैजान्छ।”स्थानीय कोपिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष देव सुनुवार ९५३० का अनुसार, २०३१ सालको बाढीले एक दर्जन घरसहित तीनहजार बिघा खेत बगाएपछि ककरु खोलामा बजेट पर्न थालेको हो। त्यसबेला तटबन्धको लागि १२० थान तारजाली लगाइएको उनी बताउँछन्। कटारी– गाउँ पञ्चायत, गाविस र नगरपालिका हुँदासम्म ककरुमा प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन भए पनि समस्या जस्ताको तस्तै छ।
जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेडले २०५२र५३ मा दिएको रु।३७ लाख ककरु तटबन्धमा गरिएको पहिलो ठूलो लगानी थियो। जीटीजेडले बलियो बाँध बनाएको कोपिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुनुवार बताउँछन्।
स्थानीयवासीको आरोप छ, पहुँचवाला र बिचौलियाहरूले ककरु खोलालाई बजेट खेलाउने थलो बनाए। गबुवाका दीपक राई ९२२० भन्छन्, “अहिलेसम्म खोलामा हालेको बजेट बाढी प्रभावितहरूलाई बाँडेको भए अन्यत्रै स्थानान्तरण हुन पुग्नेथियो।”
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को नगरपरिषद् उद्घाटन गर्न कटारी आएका सिंचाइ मन्त्री उमेश यादवले ककरु खोलाको निरीक्षण गरेर जल उत्पन्न प्रकोप विभागबाट रु।१ करोड बजेट विनियोजन गराए। तर, चलन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्दा कमिशन नपाउने स्थिति देखेपछि विभागको सिरहा कार्यालयले नयाँ उपाय लगायो। त्यसअनुसार, तीन वटा समिति बनाएर बजेट बाँडफाँड गरियो।
तीनवटै समितिमा अध्यक्षका घरपरिवारकै व्यक्तिहरू सदस्य थिए। स्थानीय शिक्षक मित्रलाल श्रेष्ठ त्यो बेला विभागको लहान शाखाका इन्जिनियर देवनन्दन मण्डललाई इष्टिमेट माग्दा नदिएको बताउँछन्। “रु।१ करोड बजेटबाट बढीमा ३३ प्रतिशत काम भयो होला”, श्रेष्ठ भन्छन्, “समितिहरूले पनि कमिशन राख्दा अझ् त्यति पनि काम भएन होला।”
इन्जिनियर देवनन्दन मण्डलले प्याकेज समितिहरू विभागको नभई राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा बनेको बताए। इष्टिमेट र कमिशन सम्बन्धी प्रश्नमा उनी भन्छन्, “काम सकिएपछि इष्टिमेट सार्वजनिक हुन्छ, जहाँसम्म कमिशनको कुरा छ, त्यो त समितिहरूलाई पनि चाहियो नि ?”